माधव नेपालको अपमान ! प्रचण्डको भाषण नसुनी कार्यक्रम छोडेर यस्तो भन्दै निस्किए नेपाल – Enepali Samchar
February 19, 2021 February 19, 2021 adminLeaveaComment on माधव नेपालको अपमान ! प्रचण्डको भाषण नसुनी कार्यक्रम छोडेर यस्तो भन्दै निस्किए नेपाल
e nepalisamchaar काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको निर्णय गरेपछि आन्दोलनमा रहेका प्रचण्ड माधव समुहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममै अपमान महशुष गर्नु परेको छ । पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल दुवै अध्यक्ष भएपनि नेपालले अध्यक्षको जस्तो सम्मान पाउन सकेका छैनन् । त्यो कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक पटक देखिएको छ ।
केही दिन अघि काठमाडौमै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा त्यस्तो संकेत देखिएको थियो । विहिवार फेरी त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ । माधव नेपालसमेत सहभागी कार्यक्रममा आयोजकले नै प्रचण्डलाई मात्र प्रमुख अतिथि भनेपछि माधव नेपालले अप्ठेरो महशुष गर्नुपरेको छ । प्रचण्डले नै सो कुरा सच्याएपछि अवस्था सामान्य भएको थियो । तर त्यस्तो घटना पछि नेपाल आफ्नो जहाज छुट्ने वहाना वनाउँदै प्रचण्डको भाषण नसुनी कार्यक्रमवाट निस्किएका छन् ।
बिहीबार नेकपाले सर्लाहीको हरिपुर९ १ हजारबिघामा आयोजना गरेको पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य डाचाराज वाग्लेको श्रद्धाञ्जली सभामा यस्तो अपमान सहनु परेको हो । कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल प्रमुख वक्ताका रुपमा निम्त्याइएका थिए।
कार्यक्रमको सञ्चालक नेकपाका सर्लाही जिल्ला सचिव कमल बुढाथोकीले आसन ग्रहण गराउने क्रममा प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथि र नेपाललाई विशेष अतिथि भनेर सम्बोधन गरे । दुई अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि भनेर प्रचार गरिएको कार्यक्रममा बुढाथोकीले प्रचण्डलाई मात्र प्रमुख अतिथि भनेर सम्बोधन गरेपछि सबै अचम्म परे ।
मुख्यमन्त्री राईको चेतावनी जबर्जस्ती गर्न खोजे प्रदेशसभा भंग हुन सक्छ
यस्तो छ कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा अस्ट्रेलियाली चार सूत्र …
माधव-झलनाथको नियतमै गम्भीर खोट छ भन्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले लगाए यस्तो संघिन आरोप